Hubka Qarsoon Ee Liverpool Ka Caawin Doona Inay Horyaalka Premier League Ku Guuleysato Oo La Kashifay | Laacibnet.net
Hubka Qarsoon Ee Liverpool Ka Caawin Doona Inay Horyaalka Premier League Ku Guuleysato Oo La Kashifay
Liverpool waxay haysataa hub qarsoon oo ka caawin doona inay ku guuleysato horyaalka Premier League sannadkii labaad oo xidhiidh ah, kaas oo ay ku dhaafi doonto Manchester United oo ay hadda niyaddeeda soo gashay inay xili ciyaareedkan qaadan karto koobka, Chelsea oo dib isku dhistay iyo Manchester City oo ah kooxda loogu saadaasha badan yahay.
Liverpool ayuu sannadkii labaad oo xidhiidh ahi u bilowday iyadoo haysa hoggaanka horyaalka Premier League, laakiin saddexdii ciyaarood ee ugu dambeeyey ayay lumisay toddoba dhibcood, taas oo keentay inay soo qabato Man United oo meel hoose kasoo dhaqaaqday, isla markaana saddex dhibcood ka sarrayn doonta haddii ay guul ka keento ciyaarta Burnley ee caawa.
Laakiin Liverpool hoggaanka ayay dib ugu soo noqon kartaa Axadda haddii ay Anfield ku garaacdo Manchester United oo kulankooda koowaad ee xili ciyaareedka ay ku ballansan yihiin, taas oo ay usbuuca xigana ku kala calaf-qaadi doonaan wareegga afraad ee tartanka FA Cup oo ay isagana isku beegmeen.
Kulamadan waaweyn iyo saddexdii ciyaarood ee kasii horreeyey ee ay labana barbarraha galeen midna laga badiyey, waxay culays ku noqonayaan tababare Jurgen Klopp.
Laakiin sida uu sheegay difaacii hore ee Manchester City ee Micah Richards, waxay Liverpool haysataa hub qarsoon oo ka caawin doona inay dhibaatooyinka ka baxdo, isla markaana horyaalka ku guuleysato.
Richards oo ka mid ah falanqeeyeyaasha ciyaaraha ee telefishannada laga daawado ka hor, kaddib iyo waqtiyada nasashada ee kulamada Premier League, ayaa tibaaxay in James Milner uu noqon doona laacibka aasaasiga ah ee la baxsan doona Liverpool, isagoo u buuxin doona hadba meesha ay ka wiiqan yihiin.
Michah Richards oo ka hadlayay BBS Sports ayaa yidhi: “Milner mucjiso kuma aha kubadda sida David Silva – laakiin kuma ayuu yahay? Laba nin lama dhaafi karo kubadda, koornaha kalena ma geyn karo. Laakiin waa ciyaartoy ku wanaagsan wax kasta oo kale halkii uu hal shay xariif ku ahaan lahaa. Wuxuu bixin karaa baas, wuxuu samayn karaa taako, kubaddu ayuu labada lugoodba ku toogan karaa.
“Ilama ah in lasii xaqiri doono intaa ka badan. Sidoo kale wuxuu ciyaaray in ka badan 800 kulan oo heerka koowaad ah, bal eeg waxa uu kusoo guuleystay – Koox kasta wuxuu la qaaday koobabka maxalliga ah, saddex Premier League, Champiosn League, Super Cup iyo Club World Cup. Waxa u dheer 60 ciyaarood oo uu xulka England u dheelay.”
Richards oo hadalkiisa sii wata, waxa uu amaan dheeraad ah siiyey Milner, isagoo yidhi: “Waligii fasax ma qaadanin. Wax kasta oo aan soo sheegay waxa u dheer, hab-dhaqan iyo khibrad uu isbeddel ugu samayn karo Liverpool.”